काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूले देश र जनताको हि’तवि’परीत कुनै काम नगर्ने बताएका छन्।नेपाल पत्रकार महा’संघको पद हस्ता’न्तरण कार्यक्रममा सभामुखले
भने, ‘देश र जनताको पक्षमा काम गर्न कसैले मलाई रोक्न सक्दैन। म त्यसका लागि दृ’ढतापूर्व’क लागेका छु। म जतिबेला जि’म्मेवारीमा रहन्छु,मैले खाएको शपथअनुसार देश र जनताको पक्षमा नि’रन्तर लाग्छु।’
देश र जनताको काम गर्न रोक्न जस्तोसुकै दबाब र प्रभाव आए पनि नरोकिने बताए। उनले भने, ‘देश र जनताको लागि कुनै कुराको त्याग र जो’खिम उठाउन तयार छु। मलाई कसैले रोक्न सक्दैन। म त्यस्तो कुराको वा’स्ता गर्दिनँ। आफ्नो ढंगले काम गर्छु।
देश र जनताको हितविपरीत कुनै काम गरेका छैन। गर्दिनँ पनि।’उनले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले हालै सभामुखको नाम लिएरै दिएका अभि’व्यक्तितर्फ लक्षित गर्दै उनले आफूले कसैको दबाब र प्रभावबिना काम गरेको र गर्ने बताए ।
‘संसदलाई चला’यमान बनाउन संविधानअनुसार अगाडि बढ्न सुरुभएपछि संसदमाथि घेराबन्दी हुन थाल्यो। अहिले पनि भइरहेको छ। केही व्यक्तिले धेरै मान्छेलाई केही समय भ्रममा पार्न सकिन्छ। तर, सधै सकिँदैन’, उनले भने।
कानुन नि’र्माणमा संसद्को महत्व’पूर्ण भूमिका रहने भएकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले चलाउन प्रयास गर्ने समेत बताए।
नेपाली जनता लोकतन्त्रको मूल्य र मा’न्यताको आधारमा चल्ने उनले बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो, ‘अत्यन्त जरुरी नपरी घर बाहिर ननिस्कनु’
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिनप्रति दिन ती’ब्र रुपमा को’रोना भा’इरसको संक्र’मण बढिरहेको बताउँदै अ’त्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननि’स्कन अपील गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले हरेक ४ दिनमा को’रोना संक्र’मणको संख्या दोब्ब’र भइरहेको बताउँदै अत्यन्त जरुरी नपरी घर बाहिर न’निस्कन अनुरोध गरेका हुन् ।
त्यस्तै, प्रवक्ता डा. गौतमले सं’रचनाले धान्नै नसक्ने गरी बि’रामीहरुको संख्या बढ्ने संकेत प्राप्त भएको पनि बताएका छन् । बुधबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कोरोनाको प्रेस ब्रि’फिङमा बोल्दै उनले भने, ‘सं’क्रमणको द’र अ’त्याधिक बढेको छ । आज मात्रै २ हजार ३५१ जना नयाँ सं’क्रमितहरु थपिएका छन् ।’
उनले थप भने, ‘हरेक चार दिनमा संक्र’मण दो’ब्बर भइरहेको छ । ड’बलिङ टाइम चार दिन रहेको छ । र हाम्रा सं’रचनाहरुले धान्नै नसक्ने गरी वि’रामीहरुको संख्या बढ्ने सं’केत प्राप्त भएको छ ।
यसकारण अ’त्यन्त जरुरी नपरी घरबाट बाहिर न’निस्कन, सभा, भेला–गो’ष्ठी, सेमिनार, मिटिङ, जात्रा नगर्न र नागरिक जीवनहरुको रक्षा गर्न सम्पूर्णमा अनु’रोध गर्दछु ।’ -न्युज २४ नेपाल
२०७८ बैशाख ८, बुधबार २०:३१ गते 1 Minute 886 Views